नयाँ सरकारको साँचो जसपासँग, कांग्रेस–माओवादी अलमलमा - नेपालबहस
नयाँ सरकारको साँचो जसपासँग, कांग्रेस–माओवादी अलमलमा
| ११:४९:०६ मा प्रकाशित
२२ चैत, काठमाडौं । सत्ता समीकरणमा कुरा नमिलेसम्म नेपाली कांग्रेस माओवादीले प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुने अवस्था छैन । कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने बताएको भएपनि जनता समाजवादी पार्टी सहभागी नहुँदासम्म नयाँ सरकार सहजै बन्ने अवस्था छैन । आज नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताएको थियो तर एकाएक बैठक स्थगित भयो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको आज बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाहले जानकारी दिएका छन् । बिहान ११ बजेपछि पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बोलाइएको बैठक स्थगित भएको नेता गणेश साहले जानकारी दिए । नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाका बारेमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको भएपनि सरकार बन्ने वा नबन्ने अझै निक्र्योल हुन बाँकी छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समेत प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गरेपछि माओवादी केन्द्रले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय गर्न सक्नेछ । माओवादी केन्द्रका केही नेता काठमाडौं बाहिर भएकाले बैठक स्थगित भएको साहले जानकारी दिएपनि खासमा नयाँ सरकारका लागि जसपाले निर्णय नगर्दासम्म संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाँदा अपरिपक्व हुने कांग्रेस माओवादीको बुझाई छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार सुरक्षित राख्न जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग वार्ता जारी राखेका छन । सत्ता साझेदारीका लागि जसपाले राखेका माग पूरा गर्न सरकार र जसपा संयुक्त कार्यदलको बैठक बसिनै रहेको छ । जसपा नेता एवं कार्यदलका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार बैठकमा माग कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भैरहेकाले अहिले नै यसै भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको छैन । ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ। अन्य माग पूरा गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,कुरा सकारात्मक छ,’ कर्णको भनाई थियो । गत बुधबारदेखिनै औपचारिक अनौपचारिक रुपमा बैठकहरु बसिनै रहेका छन् । माग सम्बोधन गर्ने विषयमा निर्णायक तहमा छलफल गर्न सरकार र जसपाका शीर्ष नेताहरूबीच चाँडै औपचारिक बैठक बस्ने जसपाको दावी छ ।
जसले माग पूरा गर्छ, हामीले त्यसैलाई समर्थन गर्ने भन्ने लाइनमा जसपाका नेताहरु रहेका छन् । जसपाको समर्थनमा सरकार टिकाउन उसले राखेका माग पूरा गर्नेबारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पनि पटकपटक शीर्ष नेताहरूसँग कुराकानी गरेका छन् । तर उपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराई भने ओलीसँग सत्ता साझेदारी गर्न असमर्थ रहेको बताउदै आएका छन् । एमालेले गठन गरेको कार्यदलमा सरकारतर्फबाट विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र राजन भट्टराई छन् भने जसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्ण छन् ।
जसपाले सत्ता समीकरण गर्नुअघि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, जेलमा रहेका रेशम चौधरी (निलम्बित सांसद) लाई थुनामुक्त गर्नुपर्र्ने, मधेस आन्दोलनका क्रममा नेता–कार्यकर्तालाई लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने, घाइतेको उपचार गर्नुपर्ने र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेको छ । जसपाको समर्थनमा ओली सत्ता टिकाउन र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन चाहन्छन । यसका लागि दुवै नेताले अलगअलग प्रस्ताव जसपासँग राखेका छन् ।
दुवैतिरबाट यस्तो प्रस्ताव आएपछि जसपाका शीर्ष नेताहरू मात्र होइन, दोस्रो तहका नेता पनि दुई कित्तामा बाँडिएका छन् । बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र उनीहरू निकट नेताहरू माओवादी केन्द्रसँग मिलेर सत्ता साझेदारी गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायत नेताहरू ओलीसँग निकट देखिएका छन् । सत्ता समीकरणका विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि जसपासँग भेटघाट र कुराकानी जारी राखेका छन् । माओवादी केन्द्रसँगको कुराकानीमा धेरैजसो जसपाका संघीय परिषद्का अध्यक्ष भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी हुने गरेका छन् ।
ओलीसँगको कुराकानीमा जसपाका अर्का अध्यक्ष ठाकुर र नेता महतो सहभागी हुने गरेका छन् । महतो निकटका नेताहरूले जसले माग पूरा गर्छ, उसैलाई समर्थन गर्ने बताउँदै आएका छन । जसले गर्दा अहिलेको सरकारलाई एक प्रकारले सहज हुँदै गएको छ । जसपाको निर्णय बेगर कांग्रेस र एमाले दुवैको सरकार बन्न सक्दैन । तर जसपाले अहिलेसम्म को सँग मिलेर सरकारमा जाने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन ।
नेपाल आर्थिक सल्लाहकारसँग ११ घण्टा पहिले
आज निर्णायक वार्ताः नेपाल १३ घण्टा पहिले
नेपाल समूहले पार्टी एकताको आह्वान गर्दै अपिल जारी गर्ने १ दिन पहिले
सबैभन्दा बढी आयकर तिर्नेमा सूर्य नेपाल प्राली ३ हप्ता पहिले
जुम्लामा आगलागी हुँदा ३५ घर जलेर नष्ट ३ हप्ता पहिले
भन्सार एजेन्टमा रोजगारीको अवसर (विज्ञापनसहित) ३ हप्ता पहिले
सरकारलाई तत्काल शिक्षण संस्था बन्द नगर्न सरोकारवालाको सुझाव २ हप्ता पहिले
प्रशान्त र लिभा बने मिस्टर एण्ड मिस थारु ४ हप्ता पहिले
काठमाडौंमा वायु प्रदूषणको मुख्य स्रोत सवारी साधन ! ३ महिना पहिले
माधव–झलनाथ पक्षको सांसद पद कति सुरक्षित ? १ महिना पहिले
बुढीखोलास्थित नहरको संरचना अत्यधिक जोखिममा २ महिना पहिले
कोरोना कहर : आर्थिक वृद्धिदर घट्दा प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३४ डलरले बढ्यो १२ महिना पहिले